Dabaabadaha Milatariga Turkey-ga oo gudaha u galay Syria – The Voice of Northeastern Kenya
Dabaabadaha Milatariga Turkey-ga oo gudaha u galay Syria
starfmke August 24, 2016
Taangiyo ay leeyihiin ciidamada Milatariga ee dalka Turkey-ga ayaa gudaha u galay dhulka dalka Syria, iyagoo ku guda jira howlgallo ka dhan ah kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga ah ee ISIL.
Milatariga Turkey-ga oo xoojinaya howlgallada noocaas ah oo helaya taageerada diyaaradaha dagaalka ee xulafada Mareykanka ayaa waxa ay isku dayayaan in ay dagaalyahannada ISIL ka saaraan magaalada u dhow xadka Turkeyga iyo Syria ee Jarablus.
Warbaahinta dalka Turkeyga ayaa maanta soo tabisay in cutubyo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee Turkey-ga ay saaka aroortii hire galeen magaalada Jarablus.
Maalmihii lasoo dhaafay ayey ciidamada dowladda Turkeyga wadeen duqeymo loo adeegsanayay madaafiicda cul culus ee Artillery-ga iyo hoobiyeyaal, kuwaasoo ay ku garaacayeen bartilmaameedyo ay kooxda Daacish iyo ururka Kurdiyiinta ee YPG ku leeyihiin gudaha Syria.
Madaxweynaha Turkeyga Rcep Tayyip Erdogan ayaa khudbad uu maanta oo arbaca ah jeediyay ku sheegay in howlgallada ay ciidamadiisa ku galeen Syria ay ujeedadooda yihiin sidii loo wiiqi lahaa dagaalyahannada kurdiyiinta ee YPG iyo kuwa kooxda ISIL.
Xukuumadda Ankara ayaa kooxda YPG oo taageero ka heysata Mareykanka u aragta in ay gacan saar la leedahay xisbiga PKK oo ay u aqoonsantahay dhaqdhaqaaq argagaxiso oo dagaal kula jiray in ka badan 30 sano.
← Askariyad ka tirsan booliska oo isku dishay garoonka diyaaradaha
Imaamyada muslimiinta dalka oo billaabay in ay la dagaalamaan xagjirnimada ardayda →